धनगढी अपडेट : बम विस्फोट हुनुअघि मृतक सिंहको प्रहरीलाई फोन, के भएको थियो संवाद ? — Motivatenews.Com
धनगढी अपडेट : बम विस्फोट हुनुअघि मृतक सिंहको प्रहरीलाई फोन, के भएको थियो संवाद ?
धनगढी – धनगढीमा हिजो साँझ भएको बम विस्फोटमा परि ज्यान गुमाउने रामबहादुर सिंहले प्रहरीलाई फोन गरेको खुलेको छ ।
प्रहरीका अनुसार घटनामा परि मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि उनले काठमाण्डौमा कार्यरत एक जना प्रहरीलाई सम्पर्क गरी काठमाण्डौ आउन लागेको जानकारी दिएका थिए । तर काठमाडौं किन जान लागेको थिए र टेलिफोनमा कुरा गर्ने प्रहरी को हुन् त्यो भने खेलेको छैन ।
प्रहरीको भने विस्फोटक पदार्थ बोकेर काठमाडौं जान लागेको प्रारम्भिक अनुमान छ । उनले बोकेका विस्फोटक पदार्थ पड्किएर उनको ज्यान गयो । विस्फोटक पदार्थ बोकेर हिँड्नुको प्रयोजन अझै नखुलेको भएपनि ठुलै योजना रहेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
विप्लव नेकपाका सक्रिय कार्यकर्ता बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१, कैलाशपिमी घर भएका सिंहले बोकेको मोबाइल र तीन ओटा सिम पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । उनको साथबाट ‘रिमोट टेस्टर’ लगायतका सामग्री पनि फेला परेको छ ।
उनले पछिल्लो समयमा को–को सँग कुराकानी गरेका थिए ? उनी कुन–कुन ठाउँमा बसेका थिए भन्ने कुरा उनले प्रयोग गर्ने तीन ओटा सिमको सहाराले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।